mairie-antananarivo – Lanterne Taxi Ville
Lanterne Taxi Ville
auteur 12 aprily 2017
Androany dia nisy ny fifanantonana teo amin’ny Talen’ny fitanterana RAKOTOARIVONY Marie William sy ireo mpamily taxi ara-dalana tsy mpikambana manaiky ny ampiasa ilay Lanterne vaovao. Ny votoatony fihaonana dia fangataham-panazavana sy fanontanina ny tena zava misy marina mikasika ny fampiasana io Lanterne vaovao io satria mbola betsaka ireo mpamily fiarakaretsaka no tsy dia mahatakatra tsara amin’ny fampiasana izany. Misy amin’izy ireo no mangataka ny fanafoanana tsotra izao.
Araka ny dinika nifanaovan’ny roa tonta ary dia mazava tsara ny « fe-petra» takiana amin’ny fampiasana Lanterne ka ny tanjona dia ny fahadiovan’ny fiara sady tsy ahitana fikorontanana eo amin’ny kojakojan’ny fiara, hanomezana ihany koa fahafaham-po ho an’ny mpanjifa, eo koa ny fiadiana amin’ny fiakaretsaka tsy ara-dalana. Raha misy fahasimbana ny Lanterne dia maimaimpoana ny solony raha tsy hoe fanahiniana nariana na nosimbaina. Nambaran’ireo mpamily koa fa azo entina miditra ao Ivato Aeroport ny taxi fa saromanana kosa ny Lanterne.
Misy ireo taxi efa nahazo lanterne ary manentana amin’ny fialana amin’ny tsy ara-dalàna. Nanamafy fa tokony tsy hirohirohy saina ny taxi eo amin’ny fampiasana ny Lanterne vaovao. Tsy manahirana hoy ireo solon-tenany ny mampiasa izany fa ilaina kosa ny manaraka ny fandaminana.
Nilaza koa izay ireo fa tsy misy intsony ireo tsy ara-dalàna raha mahazo an’io isika betsaka mantsy ny lainga afafy amin’ny fanaratsiana azy io ! vao vita ny « visite teknika » sy ny fanarahan-dalàna mombany fitaterana dia afaka maka Lanterne ny taxi.
Raha momba ilay dokam-barotra eny amin’ny LANTERNE kosa dia hisy vola ho an’ny taxi fa mbola miandry ny tompon’andraikitra ny orinasa fotsiny izay mbola any ivelany.
Farany, tsy maintsy hiroso amin’ny fanavaozana ny Kaominina ka ny mahakasika ny fangatahan’ny mpitatitra, amin’ny anjara andraikitr’izy ireo dia mbola am-pandalovina eny an’ivon’ny filan-kevitry ny mpanolon-tsaina Monisipaly izany.